> Resource> Video> Video Watermark - Olee ka Watermark a Video na Video ma ọ bụ Photo
Naa, videos ndị ọzọ na ndị ọzọ ji mee ihe na ụlọ ọrụ weebụsaịtị ka demos, Nkuzi, n'omume, na omume malite izi. Agbakwụnye a logo dị ka watermark pụrụ isi chebe ndị nwebisiinka na-enyere akwalite gị ika dị ka mma.
Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) bụghị nanị ihe ezigbo ngwá ọrụ dezie gị videos, kamakwa onye nke kasị mma video watermark software ngwaọrụ dị taa. E wezụga iji a static image dị ka logo ma ọ bụ watermark, ọ na-enye ohere ọrụ ike video watermarks simly site na-agbakwụnye a video iji Filmora Foto-in-Foto dị ọrụ. Isiokwu a ga-egosi na ị na ụzọ dị mfe iji tinye a video ma ọ bụ oyiyi dị ka a video watermark na Windows. Ọ bụrụ na ị a Mac onye ọrụ, dị nnọọ eji Mac video nchịkọta akụkọ iji nweta otu ihe ahụ.
Nzọụkwụ 1: Tinye video na watermark faịlụ ka usoro ihe omume
Ị nwere ike ma pịa "Import" bọtịnụ na isi window na họrọ faịlụ site na kọmputa gị, ma ọ bụ nanị weghara videos ozugbo na na-usoro ọrụ Album na gị kamera ma ọ bụ ndị ọzọ video-kpọọ ngwaọrụ. Nke a video watermark software akwado fọrọ nke nta niile mgbe video na oyiyi faịlụ formats, dị ka MP4, WMV, AVI, jpg, JPEG, BMP, PNG, jpg, wdg
Nzọụkwụ 2: Tinye video na watermark faịlụ ka usoro iheomume
Ndabere video kwesịrị na video track (akpa soro na usoro iheomume), mgbe ndị video / Foto dị clip nke a na-arụ ọrụ dị ka a watermark ga-dọkpụụrụ na drooped n'elu PIP track. Mgbe ahụ ị pụrụ ịgbatị oge nke watermark clip ahụ dị ka ndabere video si. Iji mee nke ahụ, i kwesịrị kpọgidere gị òké na-agwụcha onu nke watermark clip ruo mgbe akara ngosi "Ugboro abụọ akụ" cursor egosi elu, mgbe ịdọrọ ya na otu oge dị ka ndabere video.
Nzọụkwụ 3: Gbanwee watermark
Site abụọ click na watermark clip, ị nwere ike hazie ya na ya ngagharị, ọnọdụ, size, kpụzie nakwa dị ka na-agbakwunye a ókè-ala / onyinyo, wdg na ya.
Motion: Họrọ si ihe karịrị 30 iche iche nke ngagharị mmetụta na-eme ka watermark animated. A ga-enwe ihe ịrịba ama mgbe ngagharị na-agbakwunyere a watermark.
Ọnọdụ: Tinye gị òké na watermark clip na ịdọrọ ya n'ebe ọ bụla na preview window.
Size: Dọrọ na ịṅụ gburugburu watermark clip ka resize ya.
Site hapụrụ ịpị "Advanced" taabụ, ị nwere ike idezi nkpuchi na mmetụta nke watermark Obere vidiyo.
Nkpuchi: udi gị watermark na abụọ ekpe click na otu nke shapes. Gbanwee oyiyi obosara ma ọ bụ elu.
Mmetụta: Nke a taabụ enye gị ohere tinye a ókè, onyinyo, bugharia, tụgharịa ma tinye Alfa mmetụta gị watermark.
Nzọụkwụ 4: Zọpụta watermarked videos
Mgbe i na arụchaala customization nke video watermark, pịa "Mepụta". I nwere ike ịzọpụta watermarked vidiyo na ọ fọrọ nke nta ọ bụla usoro ị chọrọ site na ịpị "usoro". Ọ bụrụ na ị chọrọ ikere òkè gị vidiyo na YouTube, gaa ozugbo na YouTube taabụ na bulite watermarked videos n'ebe ahụ. I nwekwara ike ike videos maka mkpanaka ngwaọrụ na ọkụ na-DVD maka nkwado ndabere na mpaghara nzube.
Ọzọkwa ele a nzọụkwụ site nzọụkwụ video nkuzi n'okpuru:
Atụmatụ: E wezụga video watermarks, Filmora na-enyekwa ndị ọzọ video edezi ọrụ dị ka na-agbakwunye ndabere music, photos, pụrụ iche utịp, wdg
Top 10 Free Video Joiners ka mfe Jikọọ Your Videos